Minisiteran'ny aterineto - Iza ireo fiangonan'i Kristy?
Iza ireo fiangonan'i Kristy?
Avy amin'i: Batsell Barrett Baxter
Iray amin'ireo mpanolo-tsaina voalohany ny fiverenana amin'ny Kristianisma ao amin'ny Testamenta Vaovao, ho fitaovana hanatonana ny firaisan-tsain'ny mpino rehetra ao amin'i Kristy, dia i James O'Kelly avy amin'ny Fiangonana Episkopaly Metodista. Tao amin'ny 1793 dia niala tao amin'ny kaonferansa Baltimore tao amin'ny fiangonany izy ary niantso ny hafa mba hiaraka aminy handray ny Baiboly ho hany tokana. Ny fihetseham-pony dia niely be tany Virginie sy Caroline Avaratra izay nahitana ny tantara fa fito tapitrisa avy amin'ny mpanaraka azy no nanaraka ny fitarihany tamin'ny fiverenany tany amin'ny Kristianisma vaovao voalohany tao amin'ny Testamenta Vaovao.
Tao amin'ny 1802 dia nisy hetsika tahaka izany teo amin'ireo Batista tany Nouvelle-Angleterre dia notarihin'i Abner Jones sy Elias Smith. Niahy ny "anaran'ny anaram-piangonana sy ny fanekeny" izy ireo ary nanapa-kevitra ny hitondra ny anaran'ny Kristianina irery ihany, fa ny Baiboly ihany no mpitarika azy ireo. Ao amin'ny 1804, any amin'ny fanjakana tandrefana any Kentucky, Barton W. Stone sy ireo mpitory maromaro avy amin'ny Presbyteriana dia nanao hetsika mitovy amin'izany, ka nilaza fa hitondra ny Baiboly ho "mpitarika azo antoka ho an'ny lanitra" izy ireo. Thomas Campbell, sy ilay zanakalahiny malaza, Alexander Campbell, dia nanao dingana toy izany tamin'ny taona 1809 tany amin'ny fanjakana West Virginia ankehitriny. Niangavy izy ireo fa tsy tokony hisy ifandraisany amin'ny kristianina ny foto-pampianarana izay tsy antitra toy ny Testamenta Vaovao. Na dia tsy nahaleo tena aza ireo fihetsiketsehana efatra ireo tamin'ny fiandohan'ny farany, dia nanjary hetsika fanarenana mahery izy ireo noho ny tanjona iombonana sy ny fangatahan'izy ireo. Ireo lehilahy ireo dia tsy niaro ny fanombohan'ny fiangonana vaovao, fa ny fiverenana any amin'ny fiangonan'i Kristy araka izay voafaritra ao amin'ny Baiboly.
Ny mpikambana ao amin'ny fiangonan'i Kristy dia tsy mieritreritra ny tenany ho fiangonana vaovao manomboka eo am-piandohan'ny taonjato 19. Ny hetsika manontolo kosa dia natao mba hamokarana amin'ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao ny fiangonana niorina tamin'ny Pentekosta, AD 30. Ny tanjaky ny antso dia ny famerenana amin'ny laoniny ny fiangonana tany am-piandohana.
Antso voalohany indrindra ho an'ny firaisan-kina ara-pivavahana mifototra amin'ny Baiboly. Ao amin'ny tontolon'ny fivavahana iray dia heverina fa ny Baiboly no hany tokana mety ho an'ny isam-batan'olona, ​​ka ny ankamaroany, raha tsy ny rehetra, dia afaka mampiray ny vahoakan'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra. Fangatahana hiverina any amin'ny Baiboly izany. Fangatahana hiteny izay lazain'ny Baiboly sy hangina raha tsy mivavaka amin'ny fivavahana ny raharaha rehetra momba ny fivavahana. Vao mainka izy io manantitrantitra fa ny zava-drehetra ara-pivavahana dia tsy maintsy misy "Izao no lazain'i Jehovah" amin'izay rehetra atao. Ny tanjona dia ny firaisan-kina ara-pinoana ataon'ny mpino rehetra ao amin'i Kristy. Ny fototra dia ny Testamenta Vaovao. Ny fomba fiasa dia ny famerenana ny Kristianisma ao amin'ny Testamenta Vaovao.
Ny fanombanana azo itokisana indrindra dia mitongilana mihoatra noho ny fiangonana 15,000 an'ny Fiangonan'i Kristy. Ny "Christian Herald," boky ara-pivavahana ankapobeny izay manolotra antontan'isa momba ny fiangonana rehetra, dia manombana fa ny maha-mpikambana manontolo ao amin'ny fiangonan'i Kristy dia ankehitriny 2,000,000. Misy mihoatra ny lehilahy 7000 izay mitory ampahibemaso. Ny mpikambana ao amin'ny fiangonana dia mavesatra indrindra any amin'ny faritra atsimon'i Etazonia, indrindra fa i Tennessee sy Texas, na dia misy fiangonana aza ao anatin'ny firenena dimampolo sy any amin'ny firenena valo tapitrisa. Ny fanitarana ny misiônera dia be mpahalala hatramin'ny Ady Lehibe Faharoa any Eraopa, Azia ary Afrika. Mihoatra noho ny 450 mpiasan'ny fotoana feno no manohana any amin'ny firenena vahiny. Ny fiangonan'i Kristy ankehitriny dia manana in-dimy avo heny amin'ny isan'ny mpikambana voalaza araka ny voalaza ao amin'ny fanisam-pinoana ara-pinoana Amerikana ao amin'ny 1936.
Rehefa manaraka ny drafitry ny fandaminana hita ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny fiangonana ao amin'i Kristy dia mahaleo tena. Ny finoany iombonana amin'ny Baiboly sy ny fankatoavana ny fampianarany dia ny fifamatorana lehibe izay mamatotra azy ireo. Tsy misy foiben'ny foibe ao amin'ny fiangonana, ary tsy misy fikambanana mihoatra ny loholon'ny fiangonana eo an-toerana. Ny fiangonana dia miara-miasa an-tsitrapo amin'ny fanohanana ireo kamboty sy ireo antitra, amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny sehatra vaovao ary amin'ny asa hafa mitovy amin'izany.
Ny mpikambana ao amin'ny fiangonan'i Kristy dia mitarika asa aman-draharaha efapolo sy sekoly ambaratonga faharoa, ary koa zaza kamboty dimy amby fitopolo sy trano ho an'ny antitra. Misy ny gazety 40 eo ho eo sy ireo gazetiboky hafa navoakan'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fiangonana. Ny programa fampielezam-peo sy fahitalavitra iray manontolo, fantatra amin'ny anarana hoe "The Herald of Truth" dia tohanan'ny fiangonana Highland Avenue any Abilene, Texas. Ny ankamaroan'ny tetibolam-panjakana amin'ny $ 1,200,000 dia mandray anjara amin'ny fototra hafa ho an'ny fiangonana hafa an'i Kristy. Ny fandaharana amin'ny onjam-peo dia mihaino amin'ny onjam-peo 800 mihoatra ny fotoana, raha toa kosa ny fandaharana amin'ny fahitalavitra dia miseho amin'ny alàlan'ny fiarabe 150. Ny onjam-peo amin'ny onjam-peo hafa fantatra amin'ny anarana hoe "World Radio" dia manana tamba-jotra 28 any Brezila irery ihany, ary miasa am-pahombiazana any Etazonia sy any amin'ny firenena vahiny hafa, ary amidy amin'ny fiteny 14. Tetikasa fampiroboroboana an-tserasera manerantany no nanomboka tamin'ny Novambra 1955.
Tsy misy fivoriambe, fivoriana isan-taona, na fanontana ofisialy. Ny "tady izay mamehy" dia fahitsim-pihavanana mahazatra amin'ny fitsipiky ny famerenana amin'ny laoniny ny Kristianisma vaovao ao amin'ny Testamenta Vaovao.
Ao amin'ny kongregasiona tsirairay, izay efa ela no niorina tanteraka, dia misy anti-panahy maromaro na presbytera izay filan-kevi-pitantanana. Ireo lehilahy ireo dia nofidian'ny fiangonana eo an-toerana noho ny fepetra napetraka ao amin'ny soratra masina (1 Timothy 3: 1-8). Ny fanompoana eo ambanin'ny loholona dia diakona, mpampianatra ary evanjelista na minisitra. Ireo farany dia tsy manana fahefana mitovy na ambony noho ireo loholona. Ny anti-panahy dia mpiandry na mpiandraikitra manompo eo ambany fahefan'i Kristy araka ny Testamenta Vaovao, izay karazana lalàm-panorenana. Tsy misy fahefana ambonin'ny tany mihoatra ny loholon'ny fiangonana eo an-toerana.
Ireo tononkalo voalazan'ny boky enina enimpolo enina izay mirakitra ny Baiboly dia heverina ho avy amin'ny fitaomam-panahy avy amin'Andriamanitra, izay midika fa tsy mety diso sy manam-pahefana izy ireo. Ny famakiana ny soratra masina dia natao amin'ny fametrahana fanontaniana ara-pivavahana rehetra. Ny teny fanambarana avy amin'ny soratra masina dia heverina fa ny teny farany. Ny bokim-piraketan'ny fiangonana sy ny fototry ny toriteny rehetra dia ny Baiboly.
Eny. Ny fanambarana ao amin'ny Isaia 7: 14 dia nalaina ho faminaniana momba ny fahaterahan'i Kristy virjiny. Ny andalan-tsoratra masina ao amin'ny Testamenta Vaovao toy ny Matio 1: 20, 25, dia ekena amin'ny fiheverana ny fanambarana momba ny fahaterahana virjiny. Kristy dia raisina ho ilay hany Zanak'Andriamanitra nateraka, mampiray ao amin'ny maha-Andriamanitra tanteraka an'Andriamanitra sy ny maha-tonga lafatra azy.
Amin'ny heviny hoe Andriamanitra dia manendry ny olo-marina ho voavonjy mandrakizay ary ireo tsy marina ho very mandrakizay. Ny tenin'ny apostoly Petera hoe: "Hitako marina tokoa fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra; fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra Azy ka manao ny marina no ankasitrahany" (Asan'ny Apostoly 10: 34-35.). porofo fa Andriamanitra dia tsy nanendry ny olona ho voavonjy na ho very mandrakizay, fa ny tsirairay no mamaritra ny hoaviny.
Ny teny hoe bato dia avy amin'ny teny grika hoe "baptizo" ary midika ara-bakiteny hoe "manarona, manidintsidina, manidina." Ankoatra ny dikan'ny teny ara-bakitenin'ilay teny, ny fitsaboana dia ampiasaina satria io no fampiharana ny fiangonana amin'ny andron'ny apôstôly. Ambonin'izany, ny fialana sasatra ihany dia mifanaraka amin'ny filazalazana momba ny batisa izay nomen'ny apostoly Paoly ao amin'ny Romana 6: 3-5 izay ilazany azy io ho fandevenana sy fitsanganana amin'ny maty.
Tsia, ireo izay efa nahatratra ny "taonan'ny andraikitra" dia nekena ho amin'ny batisa. Asongadina fa ireo ohatra nomena ao amin'ny Testamenta Vaovao dia ireo izay nandre ny filazantsara nitory ary nino izany. Ny finoana dia tokony hialoha lalana ny batisa, ka ireo izay tratra antitra fotsiny mba hahatakarana sy hino ny filazantsara dia heverina ho olom-bitsy ho an'ny batisa.
Tsia, tsy misy mpitandrina manokana ireo mpitondra fivavahana na evanjelista ao amin'ny fiangonana. Tsy mitondra ny lohateny hoe Reverend na Ray izy ireo, fa ny adihevitra fotsiny amin'ny hoe Rahalahy no lehilahy rehetra ao amin'ny fiangonana. Miaraka amin'ireo loholona sy olon-kafa izy ireo dia manoro hevitra sy manoro hevitra ireo mitady fanampiana.